आँचललाई पाउँन पलको अनसन - समाचार - साप्ताहिक
प्रणय दिवस भर्खरै सकिएको छ । युवापुस्ता माझ निक्कै नै लोकप्रिय बन्दै गएको यो दिवस विभिन्न किसिमले सेलिब्रेसन भयो । कलाकारहरुले पनि आफ्नै तरिकाले प्रणय दिवस मनाए । प्रणय दिवसकै सेरोफेरोमा सार्वजनिक एक गीतको म्यूजिक भिडियोमा आफ्नै प्रेमीका पाउँ भन्दै अभिनेता पल शाह अनसन बसेका छन् ।
प्रेमले आँचल शर्माको मन जित्न नसकेपछि पलले आमरण अनसन बसेको दृष्य म्यूजिक भिडियोमा देखाईएको छ । यो कथा गायक शिव परियारको पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको गीतको म्यूजिक भिडियोमा समावेश गरिएको हो । गायक परियारको ‘हल्लामै माया’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो विकास सुवेदीले निर्देशन गरेका छन् ।
गायक परियारको ‘शिवालय’ एल्बममा समावेश उक्त गीत नारद निष्ठुरीले लेखेका हुन् । आशिष अविरलको संगीत रहेको गीतको म्यूजिक भिडियो अनिल के. मानन्धरले छायांकन गरेका छन । भिडियोलाई सुप्रिम पराजुलीले सम्पादन गरेका हुन् ।
आँचललाई पाउँन २ व्यापारिको निवेदन
के होला पलको ?
वर्षा र पलको प्रेम
वर्षा र पलको डेब्यु